Onye na-ahụ maka ọrụ mbupu zuru ụwa ọnụ | Ọrụ mbupu ọrụ zuru ụwa ọnụ nke China Souring & Trader
Amazon FBA MBEG Iwu mezuru Mbupu na Amazon FBA nkwakọba ihe bụ B2B mbubata na-aga mba. You nọ n’èzí China chọrọ iziga ngwa ahịa gaa n’ụlọ nkwakọba amazon? I nwere ike iwe na-emepụta mgbe esi kwadebe FBA Mbupu na ị chọrọ ịkọwa ugboro ugboro. Ọzọkwa mbubata mba dị oke mgbagwoju anya na ọ bụ nsogbu isi ọwụwa mgbe niile. Ugbu a, anyị bụ ndị a na-enyere gị aka. Anyị na-enye ndị ahịa na ọkwọ ụgbọala bulie ọrụ na isi obodo na China, pr ...
Direct Line Site na-arụkọ ọrụ na Hongkong anụ ikuku ikuku na ndị na-ebu ndị na-ebu ngwa ngwa ụwa na mba Europe na US, SunsonExpress Direct Line bụ ngwakọta na ozi nzipu ozi na ọnọdụ DDP (Kwupụta Ọrụ Akwụ ụgwọ). Anyị na-etinye ụgbọ elu site na Hongkong gaa n'ọnụ ụzọ ámá kwa ụbọchị ma jide otu ụbọchị nnabata omenala. Ọ bụ 100% n'ụzọ zuru ezu ịchịkwa na ikuku ibu na ikpeazụ mile nnyefe dị nke bụ ihe ngwọta akụ na ụba na ngwa ngwa nnyefe nke bụ tumadi d ...
Ngwọta Mbupu Postal Anyị ghọtara n'ezie azịza nzipu ozi bụ mgbe niile nhọrọ maka azụmaahịa e-azụmahịa ka ọ na-enwe ọnụego dị ala. Iji mejuo ọchịchọ ndị ahịa dị iche iche, anyị na-arụ ọrụ na nzi ozi nzi ozi na afọ ndị na-agafe ma na-ewepụ ọrụ ọjọọ site n'oge ruo n'oge. Ugbu a, ndị ọzọ kachasị mma. China Post China Post kewara ekewa n’ime ngwugwu a na-edebanye aha. Ọ bụ ọrụ ngwugwu mba ụwa maka ngwugwu ndị na-erughị 2KG. China ...
Express Service withgbọ mmiri na gị onwe gị awara awara akaụntụ dị oke ọnụ? Mgbe ahụ gịnị kpatara na ị gaghị ebubata olu anyị? Anyị na-enye ndị ahịa gosipụtara ọrụ dịka DHL, UPS na EMS na ọnụego mbelata. Mbupu ngwa ngwa na ọnụego akụ na ụba, ị kwesịrị iji ya. DHL bu ulo oru nke Deutsche Post DHL, ndi ama ama ama ama na ama ama na uwa. Ọ kachasị gụnyere ngalaba azụmaahịa ndị a: DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight and DHL Supply Chain. Na 1969, DHL mepere ihe mbu ha ...